Boka vhidhiyo chat: ndeipi sevhisi yaunofanira kusarudza?
Vanhu vanofarira kutaurirana, asi ko kana iwe uri kure nemakiromita neanodiwa interlocutor?Mhedzisiro yemhedzisiro kubva kushanu-akawanda-mushandisi vhidhiyo yekutaura masevhisi achakubatsira iwe kugadzira yako chaiyo kirabhu yekutaura neshamwari pawebhu.Hunhu uye kurerukira kwesevhisi yekutaura masevhisi kunopesvedzerwa nezvinhu zvakawanda, kubva kune iripo bandwidth kusvika kumhando yemawebhusaiti evatori vechikamu.Matafura maviri, malaptop maviri eWindows uye MacBook imwe yakashandiswa kuyedza.Makomputa aive akabatana neNetwork kuburikidza neEthernet, malaptop aive akabatana newaya.Iko kuyedzwa kwakafunga kuti zviri nyore sei kuisa nekushandisa imwe sevhisi uye kana vaine mamwe mabasa.
KuiswakweGoogle HangoutsKuti ushandise Google Hangouts, unoda Google+ account.Iwe zvakare uchafanirwa kuisa browser plug-in inoenderana neWindows XP uye pamusoro, Mac OS X 10.5 uye pamusoro, kana Linux.Vhidhiyo yekutaura yapindirwa kubva papeji yako yeGoogle+.Kurudyi unowana bhatani reKutanga Vhidhiyo Kufona.Kuidzvanya kuchakutora iwe kutanga kupeji yekuyedza apo Google inovhura webcam yako nemakrofoni.Panguva ino, hapana shamwari dzako dzave kukuona.
Munguva yemusangano wevhidhiyo, unogona kuona mavhidhiyo eYouTube
Peji yekuyedza ine block paunogona kusarudza "madenderedzwa" (kana mapoka eshamwari) anozoziviswa nezve vhidhiyo chat. Kana hurukuro yevhidhiyo yatanga, chero mushandisi anosanganisirwa mu "denderedzwa" rakasarudzwa achakwanisa kuiona uye, kana achida, pinda muhurukuro.Kuti mutange kukurukura, baya bhatani rekuti Joinha uye enda kuimba yemisangano yevhidhiyo. Unogona kukoka vamwe vashandisi kuti vatore chikamu munhaurirano nekunyora kero yavo yeGmail mubhawa kuruboshwe. Vanhu vanosvika gumi vanogona kutora chikamu mumusangano wevhidhiyo.
Vhidhiyo interface uye hutanoPanguva yekukurukurirana, mukurukuri acharatidzwa muhwindo guru, uye vamwe vose vatori vechikamu - mumahwindo maduku pasi. Iyi fomati yekuratidzira inotora kutaurirana kwakabudirira. Kana vanhu vaviri vachitaura panguva imwe chete pavhoriyamu imwechete, Google Hangouts inosarudza imwe chete yadzo, inozoratidzwa pakati. Zvisinei, kana sarudzo yeGoogle isingakuitiri iwe, unogona kuzvimiririra kusarudza kuti ndeupi wevatori vechikamu acharatidzwa pakati pehwindo.Sekuratidzwa kwakaratidza, kana musangano wevhidhiyo unounza pamwechete vanopfuura vashanu vatori vechikamu, vhidhiyo inogona kudzikira, uye dzimwe nguva mufananidzo unova wakaderera-mhando. Izwi rinokanganiswawo dzimwe nguva, asi kazhinji mhando yemavhidhiyo uye ruzha rwakanyanya.
Zvimwe ZvimiroPamusoro pekutenderera kwevhidhiyo, Google Hangouts inopa akati wandei maficha. Bhatani hombe riri pasi pemahwindo evhidhiyo rinokutendera kuti utumire meseji yeboka. Asi muhwindo rehurukuro huru yevhidhiyo, ruzivo rwekuti mumwe munhu wevatori vechikamu akatumira meseji haruonekwi. Vamwe vese vashandisi, pakufunga kwavo, tinya bhatani re "Chat" kuti uverenge tsamba.Chinhu chakakosha kugona kumisa YouTube uchishandisa bhatani riri pazasi turusi. Zvinokutendera kuti uwane vhidhiyo inozoratidzwa pachiratidziro chemba mumusangano wese. Panguva yekutamba kwevhidhiyo, Hangouts inozodzima maikorofoni yako kuti inzwi rako risatepfenyurwe pamusoro pevhidhiyo iri kumashure. Asi kana uchiri kuda kutaura, bhatani rePush to Talk rinouya kuzonunura, izvo zvinoderedza vhidhiyo uye kubatidza maikorofoni yako.
FunctionalityNotebook varidzi vanorairwa kushandisa iyi mhinduro chete kupfupi vhidhiyo makonferensi, sezvo iwo enguva refu achikonzera kupisa kunoonekwa kwemalaptop makomputa. Google Hangouts, kune rumwe rutivi, chishandiso chikuru chekukurukurirana kweboka diki vhidhiyo, asi kuti uishandise, munhu wese anofanira kunge aine Google account.
Skype PremiumKuisirwaKuti uite musangano wevhidhiyo weboka muSkype, unoda Skype Premium account nemari yekunyorera yemadhora 9 / mwedzi (yezuva rimwe chete yekuwana premium inogona kutengwa nemadhora mashanu).Nekumisikidza musangano wevhidhiyo, muridzi weiyo premium account anogona kujoinha vamwe vashandisi veSkype kwairi, zvisinei nekuti vari kushandisa account ipi - yakabhadharwa kana yemahara.Kana murongi wemusangano akasiya hurukuro yeboka, chirongwa chinopera kune vese vatori vechikamu.
Ese ari maviri emahara uye akabhadharwa mavhezheni eSkype anoda kunyoreswa nesevhisi uye kuisirwa vhidhiyo mutengi application pakombuta. Nekudaro, iyi haisiyo yakanakisa sarudzo kana vhidhiyo musangano ichida kurongeka nekukurumidza. Kana wangopinda muakaundi yako, unogona kutsvaga shamwari kuburikidza neFacebook, Gmail, Hotmail, kana nezita rako remadunhurirwa reSkype. Skype Premium inokutendera kuti ubatanidze kumusangano wevhidhiyo unosvika makumi maviri nemana. Kuti uvhure hurukuro yevhidhiyo, unofanira kushandisa yazvino vhezheni yechirongwa.
Vhidhiyo interface uye mhandoKazhinji, mhando yevhidhiyo uye odhiyo inofambiswa neSkype inokodzera kurumbidzwa kwakanyanya. Vhidhiyo yekufambisa mhando inofananidzwa neiyo yakaratidzwa neGoogle Hangouts: kazhinji yakanaka uye yakajeka, nekunonoka kudiki. Dzimwe nguva kuyerera kwevhidhiyo kunomira uye dambudziko rinokura sezvo musangano wevhidhiyo unofambira mberi. Hunhu hwekunzwika hwaive nani zvishoma pane Google. Vatori vechikamu vatsva vakaratidzwa pamasikirini madiki, asi kudzvanya pane yaunoda skrini inosimudza pane mumwe mutori wechikamu.Webcam mhando yakakosha zvakanyanya kuSkype Premium pane yeGoogle Hangouts. Muedzo wakashandisa maviri 720p HD webcams akabatana nematafura uye MacBook ine yakavakirwa-mukati iSight webcam. Musiyano mukugadziriswa kweSkype yeSight uye yeHD webcams yainakidza. Kubatanidza iwo matatu makamera kuGoogle Hangouts hakuna kuita mutsauko wakakosha mumhando, kunyangwe mufananidzo kubva kuSight wakazove wakajeka.
Zvimwe ZvimiroSkype ine akati wandei anobatsira mamwe maficha akavakwa muboka vhidhiyo sevhisi. Vatori vechikamu vevhidhiyo vanogona kutumira mameseji kune chat, iyo inozoratidzwa muhwindo rinokosha pasi pevhidhiyo. Kana mumwe wevatori vechikamu anonyora meseji, vamwe vatori vechikamu vanoona denderedzwa diki dzvuku pane chat icon, zvichiratidza kuti meseji nyowani yasvika. Zvinogoneka zvakare kutumira mameseji kumusangano wevhidhiyo weboka kuburikidza neSMS, asi basa iri rinoda imwe kubhadhara.Mukuwedzera, iwe unogona kutumira mafaera (mifananidzo, MP3) kune vamwe vatori vechikamu pamusangano kuburikidza neSkype. Izvi zvinoitwa kuburikidza nehwindo guru, iro riri nyore kwazvo, sezvo iwe usingade kuvhura browser kana email mutengi kutumira mafaera kuboka.
KushandaVhidhiyo musangano muSkype Premium inobhadharwa uye inoda kuti software yakawanda iiswe kupfuura mamwe masevhisi.Hunhu hwezwi hausi hwakanakisa pakati pemasevhisi mashanu akaedzwa, uye mhando yevhidhiyo haina nani pane yemahara Google Hangouts sevhisi.
TinychatInoisaTinychat, browser-based video chat service.Mune ino kesi, haufanire kuisa chero chinhu - iwe unongoda kuronga yako wega chat room kana kujoinha iripo.Iyo Tinychat sevhisi ndeyemahara ine mabhena ads.
Kana ukafunga kumisikidza yako wega imba yekutaura, Tinychat inokutungamira kuburikidza akati wandei mahwindo kuti ikubatsire kusarudza yako webcam nemakrofoni, uye ichakukurudzira kuti usarudze pakati maikorofoni kana Push to Talk. Muchiitiko chekupedzisira, maikorofoni ichange ichishanda chete kana bhatani rakabatwa pasi.Zviri nyore kukoka vamwe kuhurukuro yevhidhiyo. Kuti uite izvi, shandisa bhatani reGovera riri pamusoro pehwindo rekutaura. Tinychat ichagadzira URL inogona kutumirwa kune wese munhu. Unogona kuwana yako Tinychat boka kuburikidza neFacebook yako, Twitter account kana usingazivikanwe semuenzi. Vaenzi vatsva vachakwanisa kuona vhidhiyo yekutaura, asi kuti vawedzere yavo vhidhiyo rwizi kuimba yekutaura, vanozofanira kudzvanya bhatani reKutanga Broadcasting.
Vhidhiyo interface uye mhandoMuTinychat, unogona kuronga kusvika gumi nemaviri kutepfenyura, asi nhamba yevaoni haina muganho.Hunhu hwevhidhiyo paTinychat hwakanaka, asi mhando yekuteerera haina kunaka.Ruzha rwekumashure harwunakidze.Manzwi anonzwika akanyanya kuomarara uye akakanganiswa zvishoma zvichienzaniswa neHangouts uye Skype.Pane kukanganisa muodhiyo uye vhidhiyo kwemasekondi akati wandei, pamwe nekunonoka muvhidhiyo rwizi, mushure meiyo browser restart inodiwa.
Zvimwe ZvimiroChinhu chinonyanya kufadza cheTinychat iEtherPad Lite (unogona kuivhura nekudzvanya pachiratidzo nebepa pasi pehwindo revhidhiyo).Muchivharo ichi, mumwe nemumwe anotora chikamu mumusangano wevhidhiyo anogona kutora zvinyorwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushanda nemagwaro pamwechete.Uyezve, zvinyorwa zvemumwe wevatori vechikamu zvicharatidzwa mune rumwe ruvara.
KushandaKwehurukuro dzakareba, Tinychat iri kure nesarudzo yakanakisa.Asi inogona kuve mhinduro yakanaka kana iwe uchida kukurumidza kuunganidza vanhu kumusangano wevhidhiyo.Zvakare, sevhisi iyi yakakodzera basa rekubatana pamapurojekiti anoda kunyora zvakanyanya pane kutaura.
AIM AVInstallationAIM 's new AV sevhisi inoratidza kuzvipira kweAOL kuramba ichikwikwidza muindasitiri yemusangano wevhidhiyo.Iyo kambani yakagadzira nzira iri nyore uye iri nyore yekutaurirana nemapoka madiki evashandisi vana.
AV vhidhiyo chat
Kutanga nhaurirano kuri nyore kwazvo: ingosimbisa kuti wapfuura makore gumi nematatu, uye AV inokupa iwe mukana wekutaura. Mushure meizvozvo, iyo sisitimu inoburitsa URL inoda kutaurirwa kune vanozopindira mune ramangwana. Vashandisi veMac ekutanga vanogona kukumbirwa kuisa vhezheni yeAdobe Flash inoenderana neMac OS 10.6 kana kupfuura. Kune mamwe, ingangove yakatoiswa, saka hapana chikonzero chekudhawunirodha nekuisa imwe software. Pamusoro pezvo, hauzodi kunyoresa nesevhisi uye kupa AIM neruzivo rwemunhu.
Vhidhiyo interface uye mhando Mukuyedzakwedu neAV, vhidhiyo yakaita zvakaipisisa kupfuura mune mamwe masevhisi.Vhidhiyo yerukova yaiwanzomira, kunyangwe iyo odhiyo yekufambisa yaive yakanaka.Service reboot haina kupawo chinhu.Uyezve, mushure mekudzorerazve imba yekutaura, vatori vechikamu vatatu vakawanikwa, kunyange zvazvo vaviri chete ndivo vaibatanidzwa mukuedza.
Mamwe mafichaIwo ane mwero - mameseji chat uye kugona kutora zvidzitiro zvemusangano wevhidhiyo.
KushandaAV mhando haina kukodzera kubvunzurudza nyanzvi kana misangano yebhizinesi. Nekudaro, AV inogona kuve iri nyore uye intuitive mhinduro yekutaurirana neboka diki revanhu vanosvika vana, kana kukurumidza kuronga mafoni evhidhiyo pasina kuisa imwe software. Semuenzaniso, zvinoita kuti zvive nyore kutaura nehama kana vazivikanwi vasina kuremerwa neruzivo rwakawanda rwehunyanzvi.
CheroMeeting KuisirwaIyozvachose yemahara sevhisi AnyMeeting inokutendera kuti ubatanidze kusvika vanhu vatanhatu panguva imwe chete kune inoshanda vhidhiyo chat.Panguva imwecheteyo, vanhu vanosvika mazana maviri vanogona kutora chikamu mumusangano wevhidhiyo sevaoni.Kuti utange kutaura, mushandisi mumwe chete ndiye anofanirwa kunyoreswa nesevhisi (kazhinji murongi wekutaura).Kukoka vatori vechikamu, ingobaya Tanga Webinar, uye mushure mekudzvanya bhatani reKutanga mic & cam riri paToolbar yepasi, musangano wevhidhiyo uchatanga. \_
AnyMeeting vhidhiyo chat
Pakutanga, AnyMeeting icharatidza hwindo rekugadzirira.Mushure mekupa kutarisa kwako kupedzisa kubata, dzvanya bhatani rekuti Ndagadzirira uye uchazviwana uri mukamuri yemusangano wevhidhiyo.
Vhidhiyo Interface uye HunhuCheroMeeting imwe sevhisi isingashande nemazvo pamaMacs akura. Kufanana neAV, inoda kuti Adobe Flash iiswe kuMac OS 10.6 kana kupfuura. Asi mutambo unokodzera kenduru: kunaka uye kurongeka kwekutapurirana kwevhidhiyo hakusi pasi peiyo yakapihwa neGoogle Hangouts kana Skype. Hunhu hwevhidhiyo uye kutapurirana kwezwi hwakanyanya kunaka, pasina yakawandisa "simbi" uye kukanganisa.
ZvimweZvimiro AnyMeeting yakapfuma mune mamwe maficha. Iwe unogona kuratidza masikirini ezviratidziro, ruzivo rwekutumira musangano, kana kushandisa "musangano nerunhare" chimiro kuitira kuti avo vasingakwanise kuwana komputa parizvino vatevedze magadzirirwo ezviitiko. Murongi wemusangano achaona runyoro rwevanopinda, uye vachapinda vachakwanisa kusarudza chiratidzo kubva kuMenu mood menyu inoenderana nemafungiro avo. Pamusoro pezvo, kutaura kwemavara, vhidhiyo uye odhiyo zvinogona kudzimwa kana kuitwa kuwanikwa.
Kushanda Kweshamwarikana kutaurirana kwemhuri, sevhisi iyi yakawandisa nemabasa, asi yakanakira misangano yebhizinesi uye mharidzo.Uye pano kukosha kwayo kwakanyanya ndeyekuti murongi wemusangano chete ndiye anofanira kunyoresa mairi.Vamwe vese vatori vechikamu vanopinda mukamuri yekukurukura nekungoisa kero yeemail iyo yakatumirwa kukokwa kwavari.
Sarudzo yakanakisaSaka ndeipi sevhisi yakanakisa?Tinofunga kuti sarudzo yake inoenderana nezvinangwa zvako zvazvino.Google Hangouts neSkype ndiwo maviri eanonyanyo zivikanwa uye ane hupfumi masevhisi.Iwo akanakira mapoka madiki, ese ane Google kana Skype account.Hangouts ndeyemahara zvachose, asi kana mhando yezwi yakakosha kwauri, Skype inofanirwa kufarirwa.Tinychat kana AV kubva kuAIM inogona kuve sarudzo yakanaka kana uine nguva shoma uye nekukurumidza uchida kutaura pasina kuisa chero software kutanga. Nhengo dzichawana mazviri nekungodzvanya pa URL inotumirwa kwavari, mukuwedzera, ese masevhisi ese akasununguka zvachose. Tinychat inonyanya kukodzera kune avo vanofarira zvikuru kushandira pamwe pane zvinyorwa, pane kutaura kwezwi. Uye iyo sevhisi yeAV inosarudzika kutaurirana nehama neshamwari, vasingatombo nyoresa mairi. Chekupedzisira, AnyMeeting inopa yakanakisa puratifomu yemisangano mikuru yebhizinesi, sevanhu vanosvika mazana maviri vanogona kuona vhidhiyo yekuratidzira panguva imwe chete. Uyezve, murongi wemusangano chete ndiye anofanira kunyoresa nemupi webasa. Zvimwe zvinhu zvinowedzera kuwedzera mikana yebhizinesi,asi zvichave zvakanyanyisa kunyanyisa paunenge uchitaurirana neshamwari kana mhuri.
Chii chinonzi chat yevhidhiyo?
Sezvo munhu ari munhu anoshamwaridzana, kurukurirano ine basa rinokosha zvikuru muupenyu hwake.Nguva nenguva, kunyange munhu akasanyanya kuda kutaura nemumwe munhu.Mukuwedzera, pasina kukurukurirana kunobudirira uye kwepamusoro-soro, hazvibviri kugadzirisa chero basa uye nyaya dzebhizimisi.
Kwemazana emakore, vanhu vave vachishingaira kusangana neshamwari dzavo uye vavanozivana kuti vataurirane, uyewo kugadzirisa nyaya dzavo dzose mukukurukurirana.Asi chokwadi chemazuva ano ndechekuti kazhinji zvakatiomera kuwana nguva yekuita musangano, kuzviratidza pairi uye kutaura nezve imwe nyaya nemutauri watinofarira.
Sezvineiwo, mushure mekunge Indaneti yapinda muupenyu hwedu hwezuva nezuva zvakasimba uye zvakakomba, zvizhinji zvekutaurirana kwedu zvakatamira kune chokwadi chaicho.Isu tinonyorerana neshamwari pamasocial network, tinotumira maemail kune vatinoshanda navo uye vatinoshanda navo.
Munguva pfupi yapfuura, mukana mutsva wekutaurirana kuburikidza neInternet wakaonekwa, unowanikwa kune wese ane webcam uye akabatanidzwa kune yakajairika high-speed Internet pasina traffic traffic.
Kufona kwepamhepo pamhepo kuri kupihwa nemasaiti mazhinji paWebhu.Chasara kumushandisi kuita sarudzo mukufarira mumwe wavo.Chinokosha, semuenzaniso, iyo online vhidhiyo yekutaura sevhisi http://pentavideo.ru.
Iyo sosi ine yakanakira uye intuitive interface, kunze kweiyo, yakasununguka zvachose, iyo yakakosha kune vazhinji vashandisi ..
Kukurukurirana kwevhidhiyo yepamhepo inokubvumira kuti usangoita nhaurirano chete neanopindirana, asiwo kuita hurukuro nenhamba huru yevanhu kamwechete mumusangano wemusangano.Nekuda kwechikamu chekupedzisira, makambani mazhinji anoshandisa chats yevhidhiyo kuita misangano nemahofisi avo ari kure uye zvikamu.
Sezvinorehwa nezita, chat yevhidhiyo kugona kuitisa nhaurirano mufomati yevhidhiyo.Mune mamwe mazwi, hausi kungonzwa mutauri wako chete, asi zvakare kumuona kuburikidza nevhidhiyo kamera.
Kunyanya kudiwa kwe online vhidhiyo chats kazhinji, uye iyo http://pentavideo.ru sevhisi kunyanya, inonyanya kukonzerwa nekuti kutaurirana kwevhidhiyo yepamhepo kunopa mikana mikuru yekutaura manzwiro.Zvakanaka, kunyanya kukurukurirana kunoshanda hakuzokuvadzi zvigunwe zvako, sezvinowanzoitika kana hurukuro iri mumutauro wekunyorera.
Asi kutaurirana kwevhidhiyo yepamhepo kuri kuwedzera uye kukurumbira kwete yehushamwari, asi yekukurukurirana kwebhizinesi.Uyezve, zviri nyore chaizvo.Saka, somuenzaniso, maneja ari parwendo rwebhizimisi kana kuti pazororo anogona kudzora nyore nyore basa musangano rake.Hongu, uye vari pasi, kana zvichidikanwa, vane mukana wekubvunzana naye pane chero nyaya yakakosha.
Kana tikapfupikisa ese mabhenefiti makuru ekushandisa vhidhiyo chat, saka, chekutanga pane zvese, zvinotevera zvakakosha mapoinzi anofanira kucherechedzwa:
- mukana wekuita sarudzo nekukurumidza;
- kuwedzera kukuru mukugadzirwa kwevashandi;
- mukana wekuwana rubatsiro rwenyanzvi;
- kuchengetedza zviwanikwa zvemari;
Kana usati wambofanira kushandisa chimiro chekutaurirana pamhepo kuburikidza nevhidhiyo kamera kare, isu tinokurudzira kuti uedze.Zvirokwazvo haunganyadziswi.
Vesti.net: Microsoft Teams vhidhiyo chat ichaisa vatori vechikamu munzvimbo imwechete chaiyo
Microsoft yakazivisa gadziriso huru kune yayo Teams vhidhiyo musangano musangano.Chimwe chezvakanyanya kuvandudzwa kwaive kuunzwa kweiyo Together Mode - yakagadziridzwa kubva pakutanga kwedenda re coronavirus kunyanya kune avo vanoshanda nekufunda vari kure.
Iyo modhi inogadzira kunzwa kuti vese vatori vemusangano vari mukamuri imwechete yedhijitari.AI-yakavakirwa segmentation tekinoroji inofambisa avatar yevatori vechikamu kune yakajairika kumashure.Inogona kutarisa, semuenzaniso, sekirasi, umo vanhu makumi mana nemapfumbamwe vanogona kuungana kamwechete.Kune matafura akatenderera uye maworkshops, mamwe mamiriro ekunze anopiwa zvakare.
Pamwe chete Mode parizvino iri mubeta uye kambani inovimbisa kuiburitsa kune vese vashandisi veTimu muna Nyamavhuvhu.Mafirita emavhidhiyo achawanikwawo muTimu.Mukamuri yekutarisa, mushandisi anogona kusarudza sefa kuti agadzirise mwero wekuvhenekesa uye kupfavisa kutarisa kwekamera usati wapinda musangano.Iwe unogona, semuenzaniso, kusarudza kudzima kumashure kumashure kwako.
Imwe yekuvandudza ndeye Dynamic View.Sezvakataurwa neMicrosoft, zvakagoneka kuratidza zvinhu zvekubatana uye vatori vechikamu vemusangano ivo pachavo pachiratidziro chimwe.Kuwana mameseji ekutaura kwakagadziridzwa zvakare.Ese mameseji aya anotumirwa panguva yemusangano weMicrosoft Teams achaonekwa pazviratidziro zvemunhu wese pasina kuvhura chat panel zvakasiyana.
Uye imwezve innovation - subtitles ine dudziro.Vatori vechikamu vachawana sevhisi inoshandura kutaura kubva kune mimwe mitauro munguva chaiyo.Uye, naizvozvo, misangano ichabvumira vanhu vasingatauri mutauro mumwe chete kuti vataurirane.Gare gare gore rino, Microsoft iri kuvimbisa kuwedzera zvinyorwa zvemisangano, izvo zvinokutendera kuti utore zvakataurwa.Mushure memusangano, iyo yakazara faira faira inozochengetwa otomatiki mune yekutaura tebhu yemusangano iwoyo.
Microsoft inoti Matimu achakurumidza kutsigira vanosvika chiuru vanopinda misangano, pamwe nevanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana zvasvika pakuona mharidzo kana nhaurirano.Kune nharembozha, kambani inovimbisa kuunza rutsigiro rweCortana digital mubatsiri.Ichakubatsira iwe kuita mafoni asingabatanidzi kune mumwe munhu, batanidza mushandisi kumusangano wakarongwa, raira mameseji uye utumire, pamwe nemafaira anodiwa muhurukuro yemusangano.
Nyowani muJivo: vhidhiyo yekutaura, nhamba dzeakaundi uye vatsva vanopa zvechatbots
Isu takagadzirira akati wandei anobatsira magadzirirwo ayo anorerutsa basa neJivo uye kubatsira kuwedzera kutengesa.
Shanda nevatengi kuburikidza nevhidhiyo chat
Pamwe chete neVhidhiyoForce, takagadzirira mhinduro iyo ichakubvumidza iwe kumira kunze kwemakwikwi - ikozvino unogona kushanda nevatengi vesaiti kuburikidza nevhidhiyo kutaurirana, sezvazvinoitika mumunhu.
Shandisa iyo promo kodhiVF2022kusvika 03/01/2022 uye uwane emahara mazuva makumi matatu ekuwana iyo yakazara seti yeVhidhiyoForce mabasa.
Ongorora nhamba muchikamu che "Account Status".
Iye zvino muchikamu che "Account Status" unogona kuunganidza uye kuenzanisa data kune chero nguva yenguva.Pano iwe unogona zvakare kuona ruzivo rwema dialog uye mafoni ane akagadziriswa mafirita.
Ongorora nhamba uye sarudza nzira yekuvandudza zviratidzo izvi.
Batanidza chatbots kuburikidza nevanopa vatsva
Isu tinoenderera mberi nekuwedzera rondedzero yevabatsiri kuburikidza iyo iwe yaunogona kugadzira yako chatbot.Ino nguva isu takagadzira kubatanidzwa neDahi.ai uye Metabot masevhisi.
A chatbot inogona kubatsira kuderedza mutoro wekutsigira uye kuwedzera kutengesa.Nerubatsiro rweDahi.ai neMetabot masevhisi, unogona kuzvimiririra kugadzirisa bot, wedzera yako kana kushandisa magwaro akagadzirwa, uye oibatanidza kuJivo.
Mabhenefiti eMetabot- Mugadziri akavakirwa pane zvese zvinyorwa uye kuzivikanwa kwekutaura (NLU ine Dialogflow)
-Yakavakirwa-mukati dhatabhesi yekuunganidza mibvunzo uye ongororo
-Yepamberi mutengi zvivakwa, otomatiki tagging uye parameter basa
- Zvinokonzera kunonoka kutanga kwezvinyorwa uye kugadzirwa kwe autofunnels
- Zvishandiso zvekubatanidza nekunze API
-Yakavakirwa-mukati chitoro mu bot
- Yakavakwa-mukati scripting mutauro
-Kuiswa mugore kana pamaseva
Mutengo: mahara (kusvika kuvashandisi zana pamwedzi), kubva ku1000 rubles pamwedzi pamushandisi wega wega.
Dahi Benefits- Kune Madiki uye Epakati Bhizinesi
- Interface muChirungu neTurkey.Russian inotsigirwa mubhoti dialogs.
Zvimwe zvinoburitswa mumapepanhau
Vedomosti newsletters - tora huru bhizinesi nhau netsamba
Sarudzo yeFederal Service for Supervision of Communications, Information Technology uye Mass Media (Roskomnadzor) yaNovember 27, 2022 EL Nhamba FS 77-79546
Muvambi: JSC "Business News Media"
Uye pamusoro.Mupepeti-mukuru: Kazmina Irina Sergeevna
Kushambadzira uye ruzivo rwekuwedzera kune Vedomosti pepanhau.Yakanyoreswa neFederal Service for Supervision of Communications, Information Technology uye Mass Media (Roskomnadzor) pasi penhamba PI Nha. FS 77 - 77720 yemusi waNdira 17, 2022.
Chero kushandiswa kwezvinhu kunobvumirwa chete pasi pemitemo yekudhindazve uye pamberi pe hyperlink kune vedomosti.ru
Nhau, analytics, fungidziro uye zvimwe zvinhu zvakaratidzwa pane ino saiti hazviunze kupihwa kana kurudziro yekutenga kana kutengesa chero zvinhu.
Iyo saiti inoshandisa IP kero, makuki uye geolocation data yeSaiti Vashandisi, mazwi ekushandisa ari muChakavanzika Policy.
Kodzero dzese dzakachengetwa © Bhizinesi Nhau Media JSC, 1999-2022
Asia-Pacific Bank inokoka kuhurukuro yevhidhiyo "Kukanganisa kwedenda pamisika yepasi rose nemisika yekunze" muTeregiramu muna Zvita 17 na12:00.
Mumakore maviri apfuura, pane shanduko yepasi rose mumisika yemasheya.Denda iri rinoramba richikanganisa zvematongerwo enyika nehupfumi hwenyika.Nharaunda yemari iri kupindura sei dambudziko re coronavirus?Ndedzipi sarudzo dzekuvandudza kwezviitiko?Chii chakachengeterwa mari yenyika?
Musi waZvita 17, na12:00 nguva yeMoscow, chiteshi cheTeregiramu cheAsia-Pacific Bank t.me/atb_su ichaita vhidhiyo yekutaura webinar pamusoro wenyaya "Kukanganisa kwedenda pamisika yepasirese neyekunze kwenyika."
Vladimir Burdenko, Musoro weInvestment Banking Directorate yeAsia-Pacific Bank, achataura nezve maitiro ehupfumi hwenyika panguva yeCOVID-19 denda, nezve maitiro evakuru vezvemari kudiwa kwekuenderana nemamiriro matsva uye nezve zvichazoitwa. shanduko mumisika yemari munguva pfupi iri kutevera ...
Russian vhidhiyo kutaura, yemahara
Nemarudzi ose evanhu.Nhepfenyuro yepamhepo inogadziriswa nenzira yekuti zviri nyore uye zvinonakidza kuzviita.Iwe unobatanidza uye pakarepo unosvika kune interlocutor.Kana muchizvifarira - mozivana, kana usingazvifarire - unodzvanya bhatani uye une huso hutsva pamberi pako.
Hurukuro inofadza, kutamba kworudo kusingasungiri, nhaurirano dzemafirimu matsva nemafashoni, uye dzimwe nguva hurukuro dzepakati pehusiku “kweupenyu hwose”.Muzhinji, chero mamiriro aunawo nhasi, iwe zvechokwadi uchabata wave wave pano.
Tiri shamwari :)
Hongu, zvinoitika nesu.Uye kazhinji.Iwe unoona, kutaurirana paInternet kwakatendeseka zvakanyanya kupfuura muhupenyu chaihwo.Pano iwe unogona kuve iwe pachako uye usingachinji kune chero munhu.Izvi zvinoreva kuti zviri nyore kuona munhu ari pedyo newe mumweya.
Unogona kugadzirisa kutsvaga kwako neruvara rwebvudzi, saizi yezamu uye hunyanzvi hwekubika borscht.Zvakanaka, zvakanaka.Taiseka) Asi vasikana vedu vakanaka chaizvo.Zvitsvakire wega, iyi VIDEO chat.
Kune akasiyana.Brunettes, blondes, redheads.Vatambi, vaimbi, stylists.Magweta, programmers, mauto.Vanamuzvinabhizinesi, maneja nevashandi.Ndine urombo, hakuna machinda ari pabhiza jena.Asi isu tiri kutarisa :)
Sezvineiwo, rudzi urwu rwemifananidzo runouya dzimwe nguva!Vanoridza gitare, kuimba nziyo uye kuita beatboxes.Usanyarawo.Ratidza nyika tarenda rako.Ndiani anoziva, pamwe vagadziri vakarembera pano futi)
Pano tinopemberera mazuva ekuzvarwa uye kuronga "theme mapato" uye kunyange midzi yechikwata chavo chenhabvu chavanoda pamwechete.Join us!Mushure mezvose, kufara kunonyanya kunakidza mukambani huru.
Vanoda kusangana newe!Nyora kwavari nokukurumidza sezvinobvira!
Isu takagadzira iyi hurukuro yevhidhiyo kuitira kuti vanhu vanobva kumativi ese enyika vasangane uye vave nenguva yakanaka.Chinonyanya kukosha chedu kuremekedzana kune vese vanotora hurukuro.Inobvisa pfungwa dzakadai sekutuka, zvinyadzi, kutuka uye kuderedzwa kwechiremera chemunhu.Zvose izvi zvinoziviswa mumitemo yekushandisa pfuma yedu.Ndokumbira uverenge nemazvo usati watanga nhepfenyuro yako yekutanga.
Mubvunzo: Vhidhiyo iyi ndeyekutaura chete kwemazera ese?
A: Havasi vanhu vakuru chete vanotaurirana pano, asi vana vanorambidzwa zvachose kupinda muhurukuro.
Mubvunzo: Kungotaura zvine ruremekedzo!
A: Ndokumbira uve neruremekedzo uye nehanya mune yedu vhidhiyo chat!Uye ivo vachava newe zvakare!
Mubvunzo: Tiri kutaurirana zvine ruremekedzo uye zvinofadza here?
A: Hazvibvumirwi kuita hutsinye uye kugadzirisa zvinhu pano.Uyezve, kushandisa mutauro wakashata.Chero mutauro unonyadzisa unorambidzwa.Zviremekedze iwe nevamwe.
Mubvunzo: Vanonyanyisa, magandanga uye vamwe vanopenga - pfuura nemusango !?
MHINDURO: Tinokurukura nevanhu vemarudzi akasiyana, madzinza nezvitendero zvakasiyana.Uye, zvinoshamisa, vanowana mutauro wakafanana pakati pavo.Naizvozvo, kana mumwe munhu akakutsamwisa, ingochinja kune imwe interlocutor.
Mubvunzo: Zvinorambidzwa zvachose kutepfenyura mafoto evamwe vanhu, mavhidhiyo uye ruzivo rwekuonana kune chat?
A: Iwe haugone kutumira ruzivo rwakavanzika rwevechitatu mapato kune veruzhinji.Chirambidzo ichi chinobviswa chete kana ukapupurira imwe mhando yehutsotsi.
Mubvunzo: Kukurukurirana kwevhidhiyo haisi nzvimbo yekushambadza here?
A: Ipa zvinhu zvako nemasevhisi pane zvakatsaurirwa zviwanikwa.Nenzira, zvinorambidzwawo kushambadzira mamwe masayiti.
Mukutaura kwedu kwevhidhiyo, unogona kutaurirana pasina kunyoreswa, asi izvi hazvireve kuti isu hatizokwanisa kuronda matsotsi nevatadzi.Pasaiti, tinochengeta kodzero yekurekodha otomatiki nhepfenyuro dzese dzevashandisi, saka, kana zvichidikanwa, hazvizove zvakaoma kuwana uye kuranga mutadzi.Uchiri nemibvunzo?Iwe une chero mazano ekuvandudza basa revhidhiyo chat yedu?Mazita ekutaurirana nehutungamiri ari pazasi.
Maitiro ekugadzira boka revhidhiyo chat paWhatsApp
Iyo yazvino yekuvandudza kuWhatsApp inounza yakamirirwa kwenguva refu: kugona kugadzira boka redhiyo uye vhidhiyo chats.Maitiro ekutanga musangano wevhidhiyo muWhatsApp kana kufonera vanhu vakati wandei kamwechete, isu tichakuudza mune yedu chinyorwa.
Maitiro eWhatsApp Mapoka Anofona Anoshanda
Nepo basa iri risipo kune vese vashandisi - riri kuvhurwa zvishoma nezvishoma kumatunhu akasiyana.Kufona kwemapoka kunogona kuitwa chete neavo vakaisa iyo yazvino vhezheni yeWhatsApp.
Panguva yekuridza runhare mushanduro nyowani yechishandiso, unogona kukoka mumwe munhu kukambani kune wako interlocutor.Ndiko kuti, pachave nevanhu vatatu muhurukuro yekuteerera.
Vhidhiyo mafoni anogoneka pakati pevanosvika vana, saka unogona kuwedzera vamwe vanhu vaviri pachat.
Kana iwe uchida kubatanidza vanhu vanopfuura vana mumusangano, shandisa mamwe mapurogiramu.Takataura zvakadzama nezve emahara masevhisi ekutaura kwevhidhiyo mune imwe nyaya yakasiyana.
Chii chinonzi chat yevhidhiyo
Kukurukurirana kunobata basa guru muupenyu hwemagariro evanhu vose.Asi nhasi, nekuda kwekuvandudza tekinoroji, zvinokwanisika kutaura neanopindirana pamisoro yaunofarira iwe online.Vhidhiyo chats, idzo dziri kukurumidza kufarirwa, dzichabatsira kuita izvi.
Ndezvipi?Iyi ihurukuro yevhidhiyo inotsigira kutambwa kwevhidhiyo uye ruzivo rweodhiyo painternet.Yayo peculiarity iri pakuti vanopfuura vaviri interlocutors vanogona kutaurirana mairi.Kuti utange kukurukura kwevhidhiyo, iwe unongoda kuve nekombuta ine Internet kubatana, inoshanda flash-player, webcam, maikorofoni uye mahedhifoni.
Kukurukurirana kuburikidza nevhidhiyo chat kunenge kusiri kwakaderera kuhurukuro muhupenyu hwemazuva ese, sezvo mamiriro echokwadi anotsigirwa nekuona. Chat roulette inonyanya kudiwa pakati pevechidiki, iyo inokubvumira kuti unakidzwe uye uwane shamwari itsva kubva kumativi akasiyana enyika. Iyo sisitimu yesaiti inogadzirwa nenzira yekuti usati watanga kusarudza interlocutor, unogona kupinda ma parameter anodiwa, semuenzaniso, makore kana nyika yekugara. Kubatsira kukuru kwekukurukurirana paInternet ndeyekuti inokonzera manzwiro akawanda asina kujairika uye adrenaline rush mumunhu, izvo zvinoita kuti zvive zvishoma kumanikidzika, kunyange kune avo vanhu vane matambudziko akawanda nekunyara muhupenyu chaihwo. Mune mamwe mazwi, chat yevhidhiyo yakagadzirira kupa munhu wese kutaurirana nyore, iyo inogona kukanganiswa chero nguva kana iyo hurukuro ikamira kukuenderana newe.
Kana iwe uchitenda nhamba, saka vakaroorana vazhinji umo murume nemudzimai vari vagari venyika dzakasiyana vakaumbwa nekuda kwekutaurirana mumavhidhiyo chats.Naizvozvo, kana iwe usingakwanise kuwana mweya wekuroora munzvimbo yako yepedyo kwenguva yakareba, kana iwe uchingove usina hanya yakakwana kubva kune vakasiyana, ingoenda kune roulette chat.Pano iwe zvechokwadi uchawana interlocutor waunogona kuva nehurukuro inofadza uye mune ramangwana kuronga musangano muhupenyu chaihwo.
Zvakare, usakanganwa kuti chats yevhidhiyo ichave mhinduro yakanaka kune vanhu vanoda kudzidza mutauro wekunze.Mushure mezvose, kunyangwe iwe ukanyura mukati meiyo theoretical hwaro zuva rega rega, haugone kuwana mhedzisiro yaunoda pasina kudzidzira.Vhidhiyo chat chishandiso chinobatanidza mamirioni avanhu vanobva kunyika dzakasiyana.Naizvozvo, iwe unogona kusanganisa kutaurirana kunofadza neinodiwa mutauro tsika.
Microsoft Matimu achawana magumo-kusvika-kumagumo encryption muna Chikunguru
Muna Kurume wegore rino, Microsoft yakavimbisa kupa bhizinesi rayo Microsoft Teams chikuva nerutsigiro rwekupedzisira-kusvika-kumagumo encryption munguva pfupi iri kutevera.Iyo kambani nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti kuburitswa kwechinhu ichi kuchatanga kutanga kwaChikunguru.Zvinotora anenge mavhiki maviri kuti anyatsoibatanidza.
Kupera-kusvika-kumagumo encryption ndiko kuvharirwa kweruzivo kunzvimbo yarwo uye decryption kune chinangwa chayo chayakagadzirirwa pasina mukana weku decryption nepakati node.MaMicrosoft Teams achashandisa end-to-end encryption (E2EE) kune ad hoc 2-bato VoIP mafoni, zvichibvumira vashandisi kuendesa zvakachengetedzeka ruzivo rwakadzama senge mapassword.
ZvinoenderananeMSPoweruserportal , chimiro ichi chinogona kugoneswa nevatungamiriri kune vese vashandisi uye nesangano rose.Vashandisi vanogona kuzogonesa kupedzisa-kusvika-kumagumo encryption vachishandisa End-to-End Call Encryption sarudzo pasi pe Zvirongwa -> Zvakavanzika.Kurekodha uye kunyoreswa hakuchavepo.E2EE mafoni anongo tsigira zvakakosha maficha senge odhiyo, vhidhiyo, kugovana skrini, chat, uye zvepamberi maficha hazvizovepo.
Encryption inongoshanda chete kana vese varikufona nevanotambira vakagonesa E2EE muzvirongwa zvavo.End-to-end encryption inongowanikwa padesktop uye mobile clients, kwete pawebhu vhezheni yeTimu.
Snapchat achipomerwa mutsaona yemotokari inouraya
Mushure memakore matatu ekuedza kusina maturo kumhan'ara iyo yakakurumbira Snapchat messenger, vabereki vevechiri kuyaruka vakaurayiwa mutsaona yemotokari vane mukana wekuunza iyo isingabatike sevhisi kururamisiro.Zvinoita sekuti "Section 230" ine mukurumbira wakashata uye isingazungunuke yeUS Code yeMitemo, iyo inosunungura muridzi weInternet sosi kubva kune mutoro wezvinotumirwa nevashandisi pairi, yatsemuka.
Tichayeuchidza, muna Chivabvu 2022 muWalworth County, Wisconsin, vechidiki vatatu vakafa mutsaona yemotokari, vachizvitora paSnapchat. Sekureva kwevabereki vemumwe wevakabatwa, mutyairi akamhanyisa kusvika 123 mph kuti atore kumhanya kwepamusoro achishandisa Snapchat uye kugovera budiriro isingaverengeki nevanyoreri. Vanotenda kuti vechidiki havangaite hupenzi hwakadaro dai pasina zviito zveInternet service.
Ichokwadi ndechokuti Snapchat inokubvumira kushandisa mafirita akasiyana-siyana paIndaneti, kusanganisira, pakati pemabasa anozivikanwa, pane kukwanisa kupfura vhidhiyo ne "speed filter". Kuti uite izvi, chirongwa chinoteedzera chinzvimbo chechishandiso uchishandisa GPS sensors uye inoratidza kukosha kwekumhanya pavhidhiyo. Vabereki vanotenda kuti vhidhiyo sevhisi inofanirwa kuve nemhosva yezvakaitika nekuda kwekuti inoburitsa maturusi akadai, zvinoreva kuti inokurudzira vashandisi kuita zvinhu zvekusuwa vasipo.
Kuedza kwekutanga kuunza vamiriri veSnapchat kudare hakuna kubudirira. Zvinoitika kuti aya marudzi emakambani etekinoroji anowira pasi pekuchengetedzwa kwe "Chikamu 230" uye akasunungurwa zvachose pamutoro wezviito zvevashandisi mukati mesevhisi. Izvo hazvina basa kuti iri kuburitsa zvinhu zvisina kufanira here kana kushandisa sevhisi sevhisi kuvaraidzo mumamiriro ezvinhu ane njodzi - sepanyaya ino. Naizvozvo, Dare Repamusorosoro reUnited States reDare Repfumbamwe rakangoramba chikumbiro chacho ndokubvisa nyaya yacho pasina kutongwa.
Mushure memakore akawanda ekuedza kusina maturo kudarika iyo yakakurumbira "Chikamu 230", vamhan'ari vakaedza kubva kune rumwe rutivi - kana zvichitendwa kuti Snapchat iri kuita vashandisi kuita chero zviito zvine ngozi uye zvisingagamuchirwi, ipapo nyaya inogona kuhwina mudare. . Iyo sevhisi inogona kunge isiri mhosva yezviito zvevashandisi, asi pachave nekurangwa kwekukurudzira kuita chero chiito.
Zvechokwadi, mamiriro acho ezvinhu asvika pakusava nemusoro - mutemo wakanga uripo kubva muna 1996, saka, hazvibviri kufunga nezvekuita kwayo kwakarurama ikozvino, kuisa zvinyoro.Panguva imwecheteyo, kunonoka kwehurumende kunoramba kuripo, uye matare haakwanisi kuita chero chinhu chakananga munyaya dzakadaro.Mamiriro ezvinhu aya akatoita kuti vanhu vade kunzwa zvakawanda munharaunda, uye Dare Repamusorosoro reUnited States, Clarence Thomas, ave kufarira nyaya yakaoma - izvi zvinoreva kuti pane mukana wose wekushandira Snapchat ne subpoena uye kunyange kuhwina nyaya ichifarira vakakuvara. party.Uyezve, kukunda mune imwe nyaya kungazarura mukana wokuti mamwe masangano akambonzvengawo mutoro uye arambe achiita zvinopesana nemitemo yetsika.
MaMicrosoft Teams achawana magumo-kusvika-kumagumo encryption uye yakagadziridzwa mharidzo yekugona
Microsoft inoenderera mberi nekuvandudza yayo yemakambani eMicrosoft Teams chikuva uye ichawedzera akati wandei maficha kwairi munguva pfupi.Chekutanga, kupedzisa-kusvika-kumagumo encryption inozopedzisira yaonekwa pachikuva, uye chechipiri, kambani ichasiyanisa marongero uye kugona kwevhidhiyo musangano.
Iyo beta vhezheni yekuguma-kusvika-kumagumo encryption chimiro muMicrosoft Teams ichaonekwa muhafu yekutanga yegore rino kune vekutengesa vashandisi vepuratifomu.Ichave iripo kune isina kurongwa mafoni nevaviri vatori vechikamu.Mune ramangwana, zvakarongwa kuunza kumagumo-kumagumo encryption yeakarongwa vhidhiyo makonferensi ane nhamba huru yevatori vechikamu.
Microsoft Teams parizvino haitsigire kupera-kusvika-kumagumo encryption yemavhidhiyo mafoni. Dhata yakavharidzirwa mukufambisa uye pakuchengetwa, zvichiita kuti igoneke kune masevhisi ane mvumo kuti aiwane nekuibvisa. Iyo kambani inoshandisa SharePoint encryption kuchengetedza data rakachengetwa, uye OneNote encryption inoshandiswa kune manotsi akachengetwa muMicrosoft Teams. Zvese zvemukati zvekutaura zvakavharwa panguva yekufambisa uye kuchengetedza. Mukwikwidzi mukuru weMicrosoft Teams, Slack, zvakare inoshaya magumo-kusvika-kumagumo encryption. Uye sevhisi yeZoom yakatanga kubatanidza tekinoroji muna Gumiguru gore rapfuura.
Matatu matsva emharidzo modhi achaonekwawo muMicrosoft Teams vhidhiyo yemusangano masethingi.Reporter modhi inobvumira zvirimo zvedhijitari kuti zvigadziriswe padivi pechiso chemutauri sechiratidzo chekuona kune anoona.Mutoo wakafanana unoshandiswa mukubudiswa kwenhau dzeterevhizheni.
Standout modhi inobvumidza iwe kuti uise chiso chako pamusoro pezvakaratidzwa zvirimo, zviri munzvimbo yese skrini.Yechitatu padivi-ne-padivi modhi inoisa chiso chemutauri padivi pezviri kuratidzwa.Standout mode iri kuuya kuMicrosoft Teams gare gare mwedzi uno, nemamwe mamodhi maviri anouya gare gare.
Microsoft yakatangawo PowerPoint Live plugin yeTimu nhasi.Ichaita kuti PowerPoint mharidzo inyore kune vese muratidziri uye nevamwe vatori vemusangano.
Varatidziri vava kuona chat, manotsi uye masiraidhi pahwindo rimwe, uye vamwe vatori vechikamu vemusangano vanogona kuona vakazvimirira masiraidhi anoratidzwa.
Tinder muridzi anotenga Korean vhidhiyo masevhisi anovandudza Hyperconnect yemadhora 1.7 bhiriyoni
Match Group, muridzi weTinder, akazivisa kutenga kweKorea vhidhiyo masevhisi kambani Hyperconnect.Chibvumirano ichi chakasvika kumadhora mabhiriyoni 1.7.Uku ndiko kutora kukuru munhoroondo yeMatch Group.
Mugadziri weKorea ane maapuro maviri makuru: Azar ndeyekutaurirana uye vhidhiyo kutaura, uye Hakuna Live ndeyekutepfenyura online.Iyo kambani yeKorea inobatsira, nemari ya2022 inosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora, Match Group akadaro.Izvi 50% kupfuura gore rapfuura.Masevhisi anonyanya kufarirwa mumusika weAsia, saka, 75% yemari inobva kuAsia vagari.
Hyperconnect inozivikanwa zvakare nemagadzirirwo ayo matsva.Iyo kambani yakagadzira yainodaidza kuti "yekutanga nharembozha" yeWebRTC.Yakagadzirirwa yakananga peer-to-peer kubatana kwevanoshandisa nhare pasina kushandisa maseva.Izvi zvinovandudza kuchengetedzwa kwevashandisi uye zvinoderedza kuvandudza pamusoro.
Imwe tekinoroji yekambani yeKorea inoita kuti zvive nyore kune vamiriri vemapoka emitauro yakasiyana kuti vataure.Inobvumira vanopindirana kutaura uye kunyorerana vachishandisa shanduro chaiyo-nguva.Ichi chimiro chinoshandiswa mubasa reAzar.
Nechinangwa chei Match Group yakawana Hyperconnect haina kutaurwa.Vatori venhau veTechcrunch vanofungidzira kuti kambani inogona kubatanidza tekinoroji muTinder uye mamwe masevhisi ekufambidzana mune ramangwana.Kuvharwa kwechibvumirano kunotarisirwa muchikamu chechipiri che2022.
Zoom yakabatwa nemhosva yekukanganisa nhamba dzevashandisi vanoshanda
Zoom yevhidhiyo yekufona sevhisi haina mamirioni mazana matatu emazuva ese anoshanda vashandisi vakamboziviswa nekambani.Mupi webasa akabvuma chokwadi ichi mushure mekunge Verge portal yakwevera pfungwa kune yakamboburitswa chirevo chepamutemo chakagadziridzwa nacho.
Chirevo chepakutanga chaZoom chakati... "vanopfuura mamirioni mazana matatu vashandisi vezuva nezuva."uye."Vanopfuura mamirioni mazana matatu vanhu pasirese vanoshandisa Zoom panguva ino yakaoma" ...Zuva rakatevera, meseji yakagadziridzwa.Ikozvino yaverenga"300 Mamirioni Zoom Vhidhiyo Conferencing Nhengo. "
Sezvinoratidzwa neThe Verge, pane musiyano muhombe maererano nemazuva ese anoshanda mushandisi uye vhidhiyo yekutaura mutori wechikamu.Muchiitiko chechipiri, munhu mumwe chete anogona kuverengwa kakawanda: kana iwe wakaronga zvikamu zvishanu zvekukurukurirana kwevhidhiyo mukati mezuva, iwe uchaverengwa sevashanu vashandisi."Daily Active User" inoverengwa kamwe chete pazuva.Icho chiri pachiratidzo ichi kuti kufarirwa kweimwe sevhisi kunowanzoverengerwa.Zvikasadaro, vateereri vepuratifomu vacharatidzika kuva vakakura zvikuru kupfuura zvavanenge vari chaizvoizvo.
Zoom yakagadzirisa meseji inotsausa muna Kubvumbi 24, kwangosara zuva raburitswa, iro, chokwadi, rakakwanisa kupararira pamisoro yese yezvinyorwa zvepamhepo.Mushure mekunge The Verge yasvika Zoom, kambani yakabva yabvuma chikanganiso.
“Isu tinodada nekubatsira vanopfuura mamirioni mazana matatu emazuva ese vanopinda runhare kuti varambe vakabatana panguva yedenda.Mune chinyorwa pane yedu blog muna Kubvumbi 22nd, isu tisingazivi takadana nhengo se "vashandisi".Mushure mekuona kukanganisa, takagadzirisa meseji ku "nhengo".Uku kwaive kutarisa kwakakomba kwatiri, ”Zoom yakapindura chikumbiro cheThe Verge.
Kuburitswa kwepamhepo kunocherekedza kuti kunyangwe iyo kambani isati yapa dhata pahuwandu hwevashandisi vemazuva ese, kukura kwevateereri veZoom kunoshamisa.Kubva muna Zvita gore rapfuura, nhamba yevatori vechikamu vevhidhiyo yemazuva ese yakawedzera kubva pamamiriyoni gumi kusvika pamamiriyoni mazana matatu nhasi.
Vakwikwidzi vakuru veMicrosoft Teams neGoogle Meet vari kusarira kumashure, asi vari kuwedzerawo huwandu hwevashandisi vanoshanda.Vateereri vemazuva ese veMicrosoft vhidhiyo chats yemwedzi yakawedzera kubva pa70 kusvika 75 mamirioni vanhu.Mwedzi uno, kambani yakarekodha 200 miriyoni vhidhiyo conferencing vatori vechikamu pazuva.
Huwandu hwevatori vechikamu paGoogle Meet kufona kwevhidhiyo huri kukura nemamiriyoni matatu zuva rega rega kusvika miriyoni 100. Cisco Webex mushandirapamwe wekushandira pamwe wakatoshandiswa nevanhu 300 miriyoni.Uye nhamba yekunyoresa pazuva iri kusvika 240 000. Asi kambani haisati yapa zviratidzo zvevashandisi vemazuva ose uye nhamba yevatori vechikamu mumisangano yemavhidhiyo.
Google, Microsoft, Facebook vachiri pabasa rekubata-bata uye vari kuyedza kukwezva vashandisi vatsva nemikana yemahara.Semuenzaniso, Google nguva pfupi yadarika yakaita sevhisi yayo yeKusangana yemahara.